Xai Yak Techonology: November 2011
Posted by Xai Yak at 17:47 No comments:
တစ်ခါတုန်းကပေါ့.....အိမ်တွေထဲ ထွင်းဖောက်ဝင်ရောက်ခိုးယူပြီး မိသားစုဝမ်းစာကို
ရှာဖွေကျွေးမွေးနေတဲ့ သူခိုးကြီးမှာ သားတစ်ယောက်ရှိပါတယ်.....သားဖြစ်သူက
သူ့အဖေကိုကြည့်ပြီး ...အင်း.....အဖေဒီထက်အသက်ကြီးလာရင် မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်
အလုပ်လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး၊ ဒီလိုဆိုရင် မိသားစုတာဝန်ကို ငါကပဲဆက်တာဝန်ယူရမှာ ဒီတော့ ငါ့အဖေ ပညာကိုသင်ယူမှဖြစ်တော့မယ်လို့ စိတ်ကူးရတာနဲ့ သူ့အဖေကိုပညာ
လက်ဆင့်ကမ်းဖို့ တောင်းဆိုတော့သူ့အဖေကလည်း သဘောတူလိုက်တယ် သင်မယ်ပေါ့...
တစ်ညတော့ အဖေဖြစ်သူက သူ့သားကို အိမ်ကြီးတစ်အိမ်စီ ခေါ်သွားပြီး
အိမ်ထဲရောက်လို့ အကြီးဆုံးသေတ္တာတွေ့တော့ အဖေဖြစ်သူက အဖုံးကိုဖွင့်ပြီး
သားဖြစ်သူကို သေတ္တာကြီးထဲဆင်းပြိး အ၀တ်အစားတွေ
သေတ္တာထဲလဲရောက်ရော သေတ္တာအဖုံး အလုံပိတ် သော့ခတ်ပြီး အဖေကြီးလစ်တော့တာပါပဲ
အိမ်အပြင်ရောက်တော့ အိမ်ရှင်တွေနိုးလောက်အောင် တခါးရွက်ကို ခတ်နာနာထုပြီး
လာရာလမ်းအတိုင်း ခြေသံလုံလုံနဲ့ အိမ်ပြန်အားရပါးရ အိပ်နေပါသတဲ့
အိမ်ရှင်တွေလည်းအသံကြားလို့ ကပျာကယာ အိပ်ယာကထ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီး လိုက်ရှာကြတော့
သူခိုးလွတ်သွားပြီ ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်...လိုက်စစ်ကြည့်တော့ဘာမှ ပါမသွားတာနဲ့
သားဖြစ်သူကတော့ရက်စက်လှတဲ့အဖေအပေါ် မကျေမနပ်စိတ်တွေဖြစ်နေရာက အကျပ်အတည်းကလွတ်မြောက်ဖို့ စဉ်းစားရင်း လွတ်မြောက်ရေးနည်းကောင်းတစ်ခုကို
စိတ်ကူးအတိုင်းသူ့လက်သည်းတွေနဲ့ သေတ္တာကို ကြွက်ကိုက်သံမျိုးဖြစ်အောင်
တိုင်မီးနဲ့ သေတ္တာကြီးကို လှည့်ပတ်ရှာပါတော့တယ်...အပြင်မှာမတွေ့လို့
နေတာဖြစ်မယ် ဆိုပြီးသော့ဖွင့်လှပ် လိုက်ချိန်မှာ သကောင့်သားသူခိုးလဲ
ပြီး ဖယောင်းတိုင်မီးမှုတ် အိမ်ရှင်ကို တွန်းလှဲပြီး
အိမ်ရှင်တွေလည်း အင်အားသင့်မှင်သက်သလို ဖြစ်နေရာကသတိပြန်ဝင်လာပြီး
အလာတုန်းကတွေ့ခဲ့တဲ့ ရေတွင်းပျက်ကြီးနားရောက်တော့ ကျောက်ခဲတစ်လုံးကို
ပြီး ရေတွင်းထဲပစ်ချပြီး သုတ်ခြေတင်တော့တာပဲ..........၀ုန်းခနဲ
နောက်ကလိုက်လာတဲ့သူတွေ သူခိုးတော့ ရေတွင်းထဲ လိမ့်ကျသွားပြီဆိုတဲ့အထင်နဲ့
ရေတွင်းကိုဝိုင်းပြီး သူခိုးတက်မပြေးနိုင်အောင် စောင့်နေကြခိုက်
ဆေးဆေး အိပ်နေတဲ့ ဖအေကိုမြင်တော့ အဖေမို့သာအောင့်နေရတယ်၊ စိတ်ကတော့သား
အပေါ်ရက်စက်တဲ့ အဖေဆိုပြီး ဒေါသထွက်နေမိတာအမှန်ပဲ......သူ့အဖေကိုနှိုးပြီး
သားအဖချင်း ရက်စက်ရကောင်းလားဆိုပြီး အပြစ်တင်ပြောဆိုမိတယ်..........
အဖေဖြစ်သူကတော့ အပြုံးမပျက် နားထောင်ပြီး.....ကဲ...ပြောစမ်း....
မြောက်မှုဖြစ်စဉ်တွေကို တစင်တတန်း ပြောပြလိုက်တယ်.........
အေး ငါ့သား မင်းသင်ချင်တဲ့ ပညာ မင်းတတ်ပြီးပြီ
ပုံပြင်ကိုဖတ်ပြီး သူခိုးပညာသင်တာများ အဆန်းလုပ်လို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတော့
မထင်လိုက်ပါနဲ့ .....ပုံပြင်ကပေးချင်တဲ့ အကြောင်းပြချက်က
အခါ ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းကောင်းမျိုး လက်ခနဲပေါ်လာပုံကို
ကိစ္စတစ်ခုတည်းအပေါ် စိတ်စုစည်းမှုအားကောင်းလာတဲ့အခါ အသိဥာဏ်အားကောင်း
တကယ့်အရေး တကယ့်ဘေး ဘယ်သွေးသာားမကယ်ပြီ.....ဆိုတဲ့အတိုင်း ကိုယ့်ဘ၀
ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာ ကိုယ်သာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်စေကြဖို့ပါပဲ..........
Posted by Xai Yak at 17:25 No comments:
ဗုဒ္ဓပွင့်ပေါ်ခဲ့တာက (BC 623)ဆိုတော့၊ ဗုဒ္ဓက ခရစ်တော်ထက် ၆၂၃ နှစ် ပိုစောခဲ့သလို၊ မိုဟာမက် ပေါ်ခဲ့တာက(AD 570)ဆိုတော့ ဗုဒ္ဓ က မိုဟာမက် ထက်လည်း
နှစ်ပေါင်း (၁၁၉၃)နှစ် ပိုစောခဲ့တော့
၊ ယခု တရုတ်ပြည်မှာ ရှိနေတဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့စွယ်တော်(သွား) ရဲ့ သက်တမ်းဟာ နှစ်ပေါင်း(၂၆၃၃) နှစ်ရှိနေပါပြီ။ အဲဒီလောက် သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ သွားအပေါ်မှာ
သံသယမကင်းဖြစ်နေတဲ့ အနောက်တိုင်း သိပ္ပံပညာရှင်တို့ကအဲဒီ့ သွားကို Genetic Engineering နည်းနဲ့ စမ်းသပ် စစ်ဆေးလိုပါတယ်လို့ အကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုလို့ တရုတ်အစိုးရက
အဲဒီသိပ္ပံတွေ.ရှိချက်ထွက်လာစဉ်မှာဘဲ အနောက်အုပ်စု အစိုးရတွေက သူတိုရဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကို စမ်းသပ်မှုကို ချက်ချင်းရပ်လိုက်ဖို့အမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်တဲ့။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကမ္ဘာကျော်သွားမှာကိုမဖြစ်စေချင်လို.ပါတဲ့။ အနောက်အုပ်စု/ အမေရိကန် နှင့် တရုတ် တို့ ပါဝါ ပြိုင်နေချိန်လဲ ဖြစ်နေတယ်လေ။
သိပ္ပံပညာတိုးတက်မှုဟာ ဒီနေရာမှာကျတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် ကောင်းမွန်နေပါတယ် သူငယ်ချင်းတို့ ရေ...........
မှတ်ချက်။ ။ ၁၉.၁.၂၀၁၀နေ.၊ထားဝယ်မြို့တွင်ဓမ္မစေတီဆရာတော်ဟောကြားခဲ့သော ဒါနကထာ တရားတော်မှ ကောက်နှုတ်ဆင့်ပွားချက်လေးပါ။
တရုတ်ပြည်ရဲ့ တန်ခိုးအကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓစွယ်တော်တည်ထားတဲ့စေတီနဲ့ ဗုဒ္ဓစွယ်တော်အနီးကပ်ပုံတွေဖြစ်တယ်၊ ရခဲတဲ့ပုံတွေပါ၊
FOREVER FRIENDS ထာဝရသူငယ်ချင်းများ မှ တိုက်ရိုက်ကူးယူဖော်ပြထားပါသည်။
ယခုပို့စ်အား google တွင်ရှာပါက ဒီလင့်မှာ တင်ထားတာတွေ ရှိပါသည်။ သွားရောက် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
ဆရာတော်ကအခုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊15741 Via Represa San Lorenzo, CA 94580 USA မှာသီတင်းသုံးနေတာပါ။
စိတ်သည် မည်သည့် အရာပေါ်တွင်မှ ကပ်ညိခြင်း မလျဉ်းမရှိပါစေနှင့်။ကျွန်ုပ်၏ြ
ပိုင်ဘက်မှာ ကျွန်ုပ်၏ စိတ်နှင့် ကျွန်ုပ်သာဖြစ်စေရမည်။
Posted by Xai Yak at 17:18 No comments:
Posted by Xai Yak at 17:14 No comments:
ကွန်ပျူတာရှေ့ သူရှိမလားလို g-talk ကို ဖွင့်ကြည်မိတယ်
သူ ရိုက်တဲ စာသားလေးတွေ ကို မျက်ဝန်းမှာ ပုံဖော်ပြနေတယ်။
အသိစိတ် တစ်ခုကြောင့်သာ သူ ကိုယ်ကို မချစ်မှန်းသိနေပေ့မဲ
လက်မခံချင်ဘူး သူကို ဘဲချစ်နေမိတယ်။
သူအသံလေးကို ကြားမလားလို earphone လေးကို
internet ဆိုတာလေးကို တွေးတိုင်း သတိရနေမိတယ်သူကို
သူ sign out လုပ်သွားထိတိုင် မိုးလင်းထိ အိပ်မပျော်ခဲ့ဘူး။
ဆုံးရှုံးမှုမဟုတ်သော်လည်း ငါ့နားမှာ သူမရှိတဲ့အခါ လစ်ဟာနေတဲ ရင်ကိုဘယ်လို အစားထိုးရမလဲ။
ာ ဘာနဲ့မှ အလွမ်းမပြေဘူး။
သူရဲ့ဆွဲဆောင်မှု စွမ်းရည် က ငါ့နှလုံးသားကို အရည်ဖျော်လိုက်ပြီ။
ငါ့အနမ်းလေးတွေ သူသတိတရ ရှိနေမယ်ဆိုရင်ပေါ့
Posted by Xai Yak at 14:08 No comments:
မျက်နှာချိုသွေး သွေးပြီး ချစ်ရေးဆိုရမှာ ရှက်လိုက်တာကွာ
ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ အကျီ င်္ကြယ်စေ့တွေကို
ကွန်ပျူတာစက်ခလုတ်တွေပေါ်မှာ တို့နှစ်ယောက်ပျော်ရွှင်စွာ ဆုံတွေ့ကြရအောင်
Posted by Xai Yak at 14:06 No comments:
Posted by Xai Yak at 14:04 No comments:
Virus တွေ ကြောင့်မထိခိုက်အောင်လုပ်ကြည့်မယ်Registry ကို
ကျနော်တို့ တွေ နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတာက Virus ပြဿနာပါ
တကယ်တော့ Virus ဆိုတာက Registry Key တွေကို ဟိုပြင်ဒီပြင်
အကယ်လို့ ကျနော်တို့သာ အဲဒီ Registry Key တွေကို Permissions
ပေးထားမယ်ဆိုရင် Virus ရန်ကနေ 80% လောက်တော့ ကင်းဝေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
run >>> regedit >>> ကနေပြီးတော့ ကြိုက်တဲ့ Key မှာ right click
နှိပ် ပြီးရင် permissions ဆိုတာမှာ နှိပ်
အဲဒီမှာတွေ့တဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Feature ပါတာလေးတွေကို အမှန်ခြစ်လေးတွေ လိုက်ခြစ်
အဲဒါဆိုရင် Registry ကို ထိန်းတဲ့ Virus တွေ ဘာတတ်နိုင်တော့မလဲ....
Posted by Xai Yak at 14:02 No comments:
မိမိကွန်ပျူတာကိုလွယ်လွယ်ကူကူHack မခံရလေ အောင် ကာကွယ်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ဘလော့ဂါများပိတ်ထားစဉ်က ကျနော်ဘလော့ဂါကိုကျော်ရခွရ နဲ့တင်ရတာအဆင်မပြေသောကြောင့်
http://aunglay17.multiply.com ဆိုတာကိုထောင်ခဲ့ပါတယ် ယခုတင်သောပို့သည်
ဟပ်နိုင်နေပါတယ် ..ဘယ်လို ဟပ်မှာလဲဆိုတော့
run box မှာ
\_\_13.0.3.122\_E$ ဒိလိုမျိုးရိုက်ခေါ်ပြီးတော့ အလွယ်တစ်ကူ ဟပ်သွားနိုင်ပါတယ်
် ဒီ default share ($)
1. Start – Run – regedit … HKEY_LOCAL_MACHIE\_
2. ညာဘက်ရှိ Box ထဲတွင် AutoShareWks file ကို ရှာပါ။
3. AutoShareWks file အား Double Click ပါ။
Posted by Xai Yak at 14:01 No comments:
Posted by Xai Yak at 13:43 No comments:
ဒီဟာလေးကတော့ Jail-broken Iphone,ipad တို့မှာ ၀ယ်ရတဲ့ Apps တွေကို Free ရသလို Android မှာလဲဒေါင်းလို့ရမဲ့ apps လေးတခုဖြစ်ပါတယ်.အခုတလော
Android နဲ့ပက်သက်တာတွေ ရေပန်းစားတဲ့အတွက် Android အသုံးပြုတဲ့လူတွေလဲများလာမှာပေါ့ ဒါကြောင့် ဒီ apps လေးက အဆင်ပြေပြေနဲ့ Free apps တွေ ဒေါင်းလို့ရမယ်ထင်တယ်။
ဒါမှမဟုတ်အောက်ပါလင့်များမှာ Android apps တွေအများအပြား free download လို့ရပါမယ်။
DOWNLOD APPS (ifile.it)
DOWNLOD APPS (mediafire)
Posted by Xai Yak at 13:36 No comments:
Main Site ရှယ်ပေးပါဦး။
ဒီလိုလေးမေးလာတော့ ဟုတ်ကဲ ကျွန်တော် အမြဲလိုလိုယူလေ့ရှိတဲ့ Site ကတော့
Hide my ass လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီ Site မှာက Proxy တွေ စက္ကန့်နဲ့အမျှ ကို Update ဖြစ်ပါတယ်။ Port လဲ
အစုံရှိပါတယ် တခြား Site တွေကိုတော့ မပြောပြတော့ပါဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကြော်ငြာတွေ
တအားများတဲ့ Site တွေဖြစ်လို့ပါ။
www.http://hidemyass.com/proxy-list/ မှာသွားရောက်ပြီး ယူလို့ရပါတယ်။
Posted by Xai Yak at 13:35 No comments:
အလုပ်အကိုင်မှာ အသုံးပြုဖို့အတွက် English စာအုပ်လေး
ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီထဲမှာ exercise တွေ
UNIT 1 : PASSAGES FOR COMPREHENSION
- 10 sections with questions and answer keys
UNIT II : GENERAL ENGLISH
-7sections with exercises and answer keys
UNIT III : LANGUAGE ACTIVITIES
Posted by Xai Yak at 13:33 No comments:
၁ ။ (ရပါတယ်)
ဒီစကားကိုတော့ ယောင်္ကျားလေးနဲ့ ရန်ဖြစ်တဲ့အခါ၊ ငြင်းခုန်တဲ့အခါမှာ သုံးလေ့ရှိပါသည်။ ရန်ပွဲ၏ အဆုံးသတ် စကားလည်းဖြစ်
- “ငါမှန်တယ်။ ဒီကိစ္စ ဒီမှာတင်ပြီးပြီ။ နင်ပါးစပ်ပိတ်တော့” ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။
၂ ။ (ကောင်းပြီလေ)
ဒီစကားကတော့ ယောင်္ကျားလေးတွေအတွက် အင်မတန်မှ အန္တရာယ်အရှိဆုံးစကားဖြစ်ပါသည်။
- “နင့်ကိုငါ ပြန်ပြီး မကလဲ့စားချေခင်မှာ ဘယ်လိုကလဲ့စားချေရမယ်ဆို သေသေချာချာလေး စဉ်းစားဦးမယ်” ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။
၃ ။ (ဘာမှမဟုတ်ဘူး)
ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင် သူတို့စိတ်ထဲက ဘဝင်မကျတဲ့ အရာတစ်ခုခုကို ရည်ညွန်းပြီးပြောခြင်းဖြစ်ပါသည် ။
မပေါက်ကွဲခင်မှာ မီးခိုးငွေ့အရင်မှုတ်ထုတ်တဲ့ မီးတောင်လို အရှိန်ယူနေတာဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ဘာမှမဟုတ်ဘူးကနေ ရန်ပွဲတွေစတတ်ပြီး နံပါတ် (၁) က “ရပါတယ်” ဆိုတဲ့စကားနဲ့ဆုံးလေ့ရှိသည်။
၄ ။ (ငါးမိနစ်ပဲ)
ဒီစကားကိုတော့ သူတို့ မိတ်ကပ် လိမ်းတဲ့အခါ၊ အလှပြင်တဲ့အခါ၊ အပြင်သွားဖို့ အဝတ်အစားလဲတဲ့အခါတွေမှာ
သုံးလေ့ရှိပါသည်။ အဲဒီငါးမိနစ်က တစ်နာရီခွဲနှင့်ညီမျှသည်ဟု မှတ်ထားရပါမည်။ငါးမိနစ်ကလည်း ကြာလိုက်တာ
ဆိုပြီး သွားပြီးမပြောမိပါစေနဲ့။ မီးပွင့်တတ်သည်။ အိမ်နောက်ဖေးက ကိုယ်တစ်ခါမှ မနှုတ်ဖူးတဲ့ ပေါင်းပင်တွေကို
နှုတ်ရတဲ့အခါမှာ ကြာသလိုမျိုးသာ သဘောထားရပါမည်။
၅ ။ (ကျေးဇူးပဲ)
ကျေးဇူးတင်နေတာဖြစ်ပါသည်။ဘာကြောင့်လဲဆိုပြီး ပြန်မမေးပါနှင့်။ဝမ်းသာပြီးတော့လည်း မူးလဲမကျသွားပါနှင့်။
ရပါတယ် လို့သာပြန်ပြောပြီး သူလုပ်စရာရှိတာ ဆက်လုပ်ပါစေ။
၆ ။ (သက်ပြင်းချရင်)
သက်ပြင်းချတာက စကားမဟုတ်လို့ ယောင်္ကျားလေးတွေ ခဏခဏ ကောက်ချက်ချမှားတတ်ကြပါသည်။
သက်ပြင်းချတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ …
“နင်တော်တော် အ တာပဲ။ နင့်လို အ တဲ့လူနဲ့ အချိန်ဖြုန်းပြီးစကားပြောမိတာ ငါမှားပါတယ်” ဖြစ်ပါသည်။
၇ - (လုပ်လိုက်လေ၊ လုပ်ကြည့်လေ)
ဒီစကားပြောရင် စိန်ခေါ်နေတာဖြစ်ပါသည်။ ခွင့်ပြုချက်ပေးတာ မဟုတ်ပါ။ လုံးဝမလုပ်လိုက်ပါနှင့်။
၈ - (စိတ်မပူပါနှင့် ငါလုပ်တတ်ပါတယ်)
ဒီစကားကတော့ ယောင်္ကျားလေးတွေအတွက် ဒုတိယအန္တရာယ် အရှိဆုံးစကားဖြစ်ပါသည်။ သူတို့လုပ်ခိုင်းထား
တဲ့အလုပ်ကို ယောင်္ကျားကမလုပ်လို့ သူတို့ကိုယ်တိုင်ဝင်လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာ သုံးလေ့ရှိပါသည်။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့
သွားမမေးလိုက်ပါနှင့် ။ ပြန်ရမယ့်အဖြေနဲ့ အကျိုးကတော့ နံပါတ် ၃ လိုသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
(*မှတ်ချက်* - အသိတစ်ယောက်ပို့တဲ့ စာလေးပါ။)
Posted by Xai Yak at 13:28 No comments:
စာမေးပွဲကျတဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က သူစာမေးပွဲကျရတာ စာကျက်ချိန်မရလို့ပါတဲ့။ တစ်နှစ်မှာ ၃၆၅ ရက်ပဲရှိတော့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး စာကျက်ချိန်ရတော့မလဲလို့ပြောပြီး
""တစ်နှစ်မှာ တနင်္ဂနွေနေ့ပေါင်း ၅၂ နေ့ရှိတယ်လေ။ တနင်္ဂနွေဆိုတာက နားရက်လေ၊ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး စာကျက်မလဲ၊ ကဲ- တစ်နှစ်မှာ ၃၆၅ ရက်ရှိတော့ ၅၂ ရက်ကို နုတ်၊ ၃၁၃ ရက် ကျန်သေးတယ်ထား""
""လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်နေ့မှာ ၈ နာရီတော့ အိပ်ပေးဖို့ လိုတယ်လေ၊ အဲဒီ့တော့ တစ်နှစ်မှာ ရက်ပေါင်း ၁၇၂ က အိပ်တာနဲ့ပဲ ပြီးသွားရော၊ ဒီတော့ ၁၄၁ ရက်ပဲ ကျန်တော့တယ်""
""ကျန်းမာရေးအတွက် ကစားခုန်စားလုပ်ဖို့ကလဲ လိုအပ်တော့ တစ်နေ့မှာ တစ်နာရီ ကစားတယ်ဆိုရင် တစ်နှစ်မှာ ၁၅ ရက်က ကစားဖို့၊ ဒီတော့ ၁၂၆ ရက်ပဲ ကျန်တော့တယ်""
""ထမင်းစားချိန်ပေးရတာနဲ့၊ ကော်ဖီသောက်ချိန်ပေးရတာနဲ့၊ Chewing gum ၀ါးရတဲ့အချိန်တွေကိုပါ ပေါင်းလိုက်ရင် တစ်နေ့မှာ ၂ နာရီလောက် အချိန်ပေးနေရတော့ တစ်နှစ်လုံးဆိုရင် ရက်ပေါင်း ၃၀ က စားဖို့သောက်ဖို့ အချိန်ပေးလိုက်ရပြန်ရော၊ ကဲ- ဘယ်နှစ်ရက်ပဲ ကျန်တော့လဲ၊ ၉၆ ရက်ပဲ ကျန်တော့တယ်""
""လူဆိုတာက လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ နေတာဆိုတော့ တစ်နေ့ကို တစ်နာရီလောက်က စကားစမြည်ပြောရသေးတယ်၊ ဒီတော့ တစ်နှစ်မှာ ၁၅ ရက်က စကားပြောဖို့အချိန်ပေးရတယ်၊ ၈၁ ရက်ပဲကျန်တော့တယ်နော်""
""လပတ်စာမေးပွဲတွေ၊ ပထမ၊ ဒုတိယအစမ်းစာမေးပွဲတွေ၊ အစစ်ကြီးတွေနဲ့ တစ်နှစ်မှာ ၃၅ ရက်လောက်က စာမေးပွဲချည့် ဖိဖြေနေရတော့ ၄၆ ရက်ပဲ ကျန်တော့တယ်""
""နေ့ထူးနေ့မြတ်တွေကလဲ တစ်နှစ်မှာ ရက် ၄၀ လောက်ဖြစ်နေတော့ သွားပြီပေါ့၊ ၆ ရက်ပဲ ကျန်တော့တယ်""
""အအေးမိလို့ နှာစေးလို့ နားနေရတာက တစ်နှစ်လုံးမှာ ၃ ရက်ပဲ ရှိတယ်ထားဦး၊ ၃ ရက်ပဲ ကျန်တော့တယ်""
""တစ်နှစ်မှာ ၂ ရက်ပဲ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်တယ်ထားပါ၊ ၁ ရက် ပဲကျန်တော့တယ်""
""အဲဒီတစ်ရက်ကျတော့လဲ ကျွန်တော့်မွေးနေ့ ဖြစ်နေရော၊ ကဲ- ဘယ်လိုလုပ်ပြီး စာကျက်တော့မလဲ""
Posted by Xai Yak at 13:27 No comments:
ဓာတ်ပုံထဲမှာ လှလှလေးဖြစ်စေချင် ဓာတ်ပုံတိုင်းမှာ လှစေဖို့ မှတ်သားစရာနည်းအတိုအထွာလေးတွေပါ
ရိုက်တော့မယ်ဆိုမှ မျက်လုံးတွေမို့၊ မျက်ကွင်းတွေညို ဆို သိပ်အဆင်မပြေပါဘူး။ မျက်လုံးတွေမို့နေရင် ပါးပါးလှီးထားတဲ့သခွါးသီး ကိုမိနစ်အနည်းငယ်ကပ်ပေးပါ။ သခွါးသီးမှာပါတဲ့ပိုတက်စီယမ်ဓာတ်က တော့ မျက်ကွင်းမည်းတွေကို စုပ်ယူပေးပါလိမ့်မယ်။
• သင်ရိုက်မယ့်ကင်မရာက Flash ပါနေပါသလား? ဒါဆိုရင်တော့နှုတ်ခမ်းနီ၊ ပါးနီ ကို နည်းနည်း ပိုပြီးမြင်သာအောင်ပြင်ရမှာပါ။ အကယ်၍ ပါးရိုးကိုမြင့်မြင့်နဲ့ ထင်ထင်လေးဖြစ် ချင်ရင် ပါးရိုးအောက်နေရာကို ပိုပြီးထင်းထင်းလေးဖြစ်အောင် ခြယ်ပေးရပါမယ်။
• အဝတ်အစားတွေကို သိပ်ဦးစားပေးမတွေးပါနဲ့။ အရမ်းတောက်လွန်း ထင်ရှားလွန်းတဲ့ အဝတ်တွေဟာ၊ ကြည့်တဲ့သူကို သင့်ထက် သင့်အဝတ်အစားတွေဆီ အာရုံရောက်သွား စေနိုင်ပါတယ်။
• အရောင်တူ၊ ဒါမှမဟုတ် အရောင် ခပ်ဆင်ဆင်လေးတွေကို အထက်အောက်ဝတ်ရင် သင့်ကို ကြည့်ရတာပို သွယ်စေပါတယ်။
• ကန့်လန့်စင်း နဲ့ အတွန့်၊ ရှုံ့ကြိုး ပါတဲ့ အဝတ်တွေက သင့်ကို ပြည့်စေ ပြီး၊ ဒေါင်လိုက်စင်းနဲ့ အောက်ရှူး ဘောင်းဘီတွေက သင့်ကိုပိန်တယ် ထင်စေရပါတယ်။
• ခါးအပေါ် တက် ဝတ်ရတဲ့ဘောင်ဘီတွေက သင့်ရဲ့ပေါင်တံတွေကိုပိုပြီး ရှည်လျားသွယ်လျစေပါတယ်။
• အခုပေါ်ပင်ဖြစ်ဖြစ်ပြီး ခေတ်ဆန်နေတဲ့ အဝတ်တွေကို၊ တစ်ချိန်ပြန်ကြည့်ရင် ဒိတ်အောက် နေကြောင်းတွေ့ရမှာအမှန်ပါပဲ။ဒါကြောင့်၊ ရိုးရှင်းပြီးဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် ရိုးမသွားတဲ့အဝတ်ကိုဝတ်ပါ။
• ပိန်တဲ့အမြင်ဖြစ်စေချင်ရင်တော့ သင့်လက်မောင်းကို ကိုယ့်နဲ့ကပ်မထားပါနဲ့။
• သင့် ကိုယ် ကို တစ်တောင့်တည်း မဖြစ်စေဖို့ ခြေတစ်ဖက် ကိုနောက်ဆုတ်၊ ပခုံး နဲ့ခေါင်း angle မတူအောင်ထား၊ ပြီးရင်သင့် ကိုယ် ဝိတ် ကို အနောက်ခြေထောက်ပေါ်မှာထားလိုက်ပါ။
• မေးစေ့နှစ်ထပ် ဖြစ်နေရင် မေးကိုအနည်း ငယ် မော့ထာပေးပါ။
• သင့်တင်ပါးကို သေးစေချင်ရင် ကင်မရာဘက်ကို ပခုံးတည့်တည့်ထား၊ တင်ပါးကို သုံး ပုံလေးပုံ လှည့်ပြီး ရိုက်ပါ။
• ပိန်စေချင်ရင် ရိုက်တဲ့သူကို မိမိရဲ့ ခေါင်းအပေါ်ကနေ ဆီးပြီး ရိုက်ခိုင်းပါ။ အဲဒါကသင့်ရဲ့ ကိုယ်လုံးကိုမဟုတ်ပဲ မျက်နှာ၊မျက်လုံးတွေကို အသားပေးပါလိမ့်မယ်။
• သင့်ရဲ့ နှာခေါင်းပုံစံကလည်း ကင်မရာ Angle ပေါ်လိုက်ပြီးပြောင်းနေတာပါပဲ။ သင့်နှာတံတိုနေရင် အထက်စီးကနေရိုက်ရ ပြီး သင့်နှာတံရှည်နေလို့တိုချင်ရင် Angle နည်းနည်း နှိမ့်ပြီးရိုက်ရပါတယ်။
• သင် အပြင်မှာရိုက်တယ်ဆိုရင် နေတိုက်ရိုက်ထိုးတဲ့ဘက်မှာမနေတာ ကောင်းပါတယ်။အထူးသဖြင့် နေ့လည်တွေပေါ့။
• တိမ်ရှိနေတာ စူးရှရှ နေရောင်ထက် ဓာတ်ပုံကို အလင်းအမှောင်ညီညီညာညာ ရှိစေပါတယ်။ မနက်ပိုင်း ဒါမှမဟုတ် နေဝင်ခါနီး အချိန်ရိုက်တာက အလင်းအမှောင်ကောင်း ကောင်း နဲ့ အကောင်းဆုံး ဓာတ်ပုံကို ပေးပါလိမ့်မယ်။
• တမင်တကာ ဟန်ဆောင်အပြုံးကြီး မဖြစ်စေဖို့သင်ကို ရယ်စေတဲ့ အဖြစ်တစ်ခုခု ကောက် စဉ်းစားလိုက်ပါ။
• အဲဒါနဲ့ အလုပ်မဖြစ်ရင် အသက်ကို ရှူသွင်း၊ ရှူထုတ်တဲ့အချိန်မှ ပြုံးပါ ။Professionalတွေက အဲဒီ နည်း နဲ့ပြုံးကြပါသတဲ့။အဲဒီလိုလုပ်တာက သင့်မျက်နှာမှာရှိတဲ့ တင်းနေတဲ့ကြွက်သားတွေကိုလျှော့ပေးပြီး သင့်အပြုံးကိုပိုပြီး သဘာဝကျစေမှာပါ။
အခုတော့ ဓာတ်ပုံထဲမှာ ဘယ်လိုနေရင် လှလှလေး ဖြစ်မယ် ဆိုတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကိုသိပြီပေါ့။ မလှတဲ့ပုံတွေထွက်မှာ မစိုးရိမ်ရတော့ပါဘူးနော်?
Posted by Xai Yak at 13:23 No comments:
ချစ်သူကို ကွန်ပျူတာထဲ ထည့်သိမ်း
ငါ့ အဝေးဆုံးမှာ တစ်ယောက်တည်း
မျက်နှာပြောင်တိုက် အသုံးအနှုန်းလို့ ထင်ယောင်
ကမ္ဘာတစ်ဖက်မှာ မင်းငိုသံ ငါမကြားပါ
ဆောရီးပါ . . .
မိန်းမတွေရဲ့ လက်နက် မျက်ရည်နဲ့ မပစ်ခဲ့တဲ့ မင်း
ငါ့အနား လာနားတဲ့ လိပ်ပြာတစ်ကောင်ဖြစ်ဖို့
ကျား/ဗိုလ်ဆွဲသလို နွှဲခဲ့ကြတာ မဟုတ်ဘဲ။
မင်းမသိပေမယ့် ငါသိတယ် လရိပ်ဖြူ
နက္ခတ်ဆရာမသိတဲ့ နေကြတ်၊လကြတ် အခါသမယဟာ
ဒါလီရေ. . . ငါ့နာရီတွေ ပျော့ခွေမသွားဘူး
မင်းနဲ့ငါ ၃နဲ့၎ လိုပြေးထွက်ခဲ့ပြီ
လရိပ်ဖြူရေ. . .
မင်းနဲ့ငါ့ နာမည် ကမ္ဗည်းတင်ပြီ
စာကြည့်တိုက်တစ်ခုမှာ မင်းနဲ့ ငါ့အနမ်းက
တခါတခါ ပိတ်နေတဲ့ တံခါးကို
ရင်မနာဖို့ ဂရုစိုက်ပါ လရိပ်ဖြူ
ငါ့ အမှားမှာ သင်ခန်းစာ
အိပ်ရေးဝ ၀ အိပ်ပါ
ငါ စိတ်နဲ့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ချင်တယ် လရိပ်ဖြူ
ငါချစ်တဲ့ မင်းတစ်ယောက် ကျန်းမာပျော်ရွှင် စိတ်တိုင်းကျသူ ဖြစ်ပါစေ ။
Posted by Xai Yak at 13:18 No comments:
“အဓိကတော့ အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းရှည်တွေနဲ့ မကြည့်ဖို့ ညှိထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုလည်း
ဘယ်လိုပစ္စည်းတွေတော့ အသုံးပြုခွင့် ပြုတယ်ဆိုပြီး အပြန်အလှန်ညှိနှိုင်းထားကြတယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
Posted by Xai Yak at 11:36 No comments:
(မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်ရင်...78 ချက်ထဲက ဘယ်နှချက် သင် လုပ်နိုင်သလဲ)မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်ရင်...
မြန်မာအမျိုးသမီးများ အကြမ်းဖက်မှု ကာကွယ်ရေးအထိမ်းအမှတ်နေ့ အမှတ်တရ (25/11/11)
Posted by Xai Yak at 11:33 No comments:
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀ ရာစုနှစ်တွေအ တွင်း ဝေလငါး တွေရှာဖွေဖမ်းဆီး တဲ့ သင်္ဘော အုပ်စုကြီး တွေ ကြောင့် တချို့ ဝေလငါး မျိုးတွေဟာ မျိုးသုဉ်း ပျောက်ကွယ် သွားရမယ့် အခြေအ နေအထိ ရောက် ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဒီ လိုဝေလငါးတွေကို
အလွန်အကျွံ ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်နေကြတာကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ၁၉၄၆ ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံတကာ ဝေလငါးကော်မရှင် (International Whaling Commission) တစ်ရပ်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါ တယ်။
အဲဒီကော်မရှင်ဟာ ဆယ်စု နှစ်များစွာ လေ့လာစုံစမ်းခဲ့ပြီး၊ အကြိမ်ကြိမ်ငြင်းခုံကာ ၁၉၈၂ ခုနှစ် မှာ ဝေလငါးတွေကို ဖမ်းဆီးပြီး ရောင်းဝယ်ရရှိတဲ့ငွေတွေအား ဘဏ် တွေက လက်ခံခြင်း မပြုကြဖို့ သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၊ လေ ထုရေထုညစ်ညမ်းလာမှုနဲ့ ရေနေ သတ္တဝါတွေ နေထိုင်နိုင်တဲ့ ရပ်ဝန်း တွေ ပျက်စီးလာမှုတွေကြောင့် ပင်လယ်ရေသတ္တဝါတွေရဲ့ ရှင်သန် ရပ်တည်ရေးကို အကြီးအကျယ် ခြိမ်းခြောက်လာနေပါတယ်။
IVCN သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရေးနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့တို့ရဲ့ပူး ပေါင်းကြားဖြတ် အစီရင်ခံစာကို ကုလသမဂ္ဂသို့ တင်ပြခဲ့ရာမှာ ပင် လယ်ရေပြင်ဂေဟစနစ် ဆုတ်ယုတ် ပျက်ယွင်းလာတဲ့ အမြန်နှုန်းဟာ မျှော်လင့်ထားတာထက် ပိုပြီးမြန် ဆန်လာနေတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါ တယ်။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာခြင်း၊ အက်စစ်ဓာတ်လွန်ကဲလာခြင်းနဲ့ အောက်စီဂျင်ဓာတ်လျော့နည်းလာ ခြင်းတို့ကြောင့် ၁၉၉၈ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ သန္တာကျောက်တန်းမျိုး သုဉ်းခြင်း (Coral Bleading) လို့ခေါ်တဲ့ အပူပိုင်းဒေသသန္တာ ကောင်၁၆ရာခိုင်နှုန်း သေဆုံးခဲ့ရ တဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုမျိုးတွေဖြစ်ပေါ် လာနိုင်ပါတယ်။ ပင်လယ်ငါးတွေ ကို အလွန်အကျွံဖမ်းဆီးနေတဲ့ အတွက်လည်း ငါးအရင်းအမြစ်တွေ ဆုတ်ယုတ်လာပြီး မျိုးစိတ်အများ အပြားပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်အနည်း ငယ်အတွင်း အလွန်ကြီးမားတဲ့ နိုင်လွန်ငါးဖမ်းပိုက်တွေနဲ့ ငါးဖမ်း တဲ့စနစ်ကို အသုံးပြုလာတဲ့အတွက် ပင်လယ်တွင်းရှိငါးနဲ့ ရေသတ္တဝါ အားလုံးကို ခြိမ်းခြောက်လာနေပါ တယ်။ ၄၈ ကီလိုမီတာလောက် ကျယ်တဲ့ ပင်လယ်ပြင်ထဲကိုဖြန့် ကြက်ပြီး ပင်လယ်ပြင်ကြမ်းခင်း အထိ တရွတ်တိုက်ဆွဲကာဖမ်းဆီး နိုင်တဲ့အတွက် အဲဒီဧရိယာအတွင်း ရှိ ရေသတ္တဝါတွေ၊ လိပ်တွေ၊ ပင် လယ်ငှက်တွေ၊ ဝေလငါးတွေ၊ ဖျံ တွေနဲ့ တခြားငါးမျိုးများစွာကိုပါ သေကြေပျက်စီးစေပါတယ်။
ဒါ ကြောင့် ကုလသမဂ္ဂဟာ ၁၉၉၂ခု နှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ရက်နေ့ကစပြီး အလွန်ကြီးမားတဲ့ငါးဖမ်းပိုက်တွေနဲ့ ပင်လယ်ရေနက်အတွင်း ငါးဖမ်း ခြင်းကို ဟန့်တားခဲ့ပါတယ်။ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာအတွင်း ရေနံသင်္ဘောတွေ တိမ်းမှောက်လို့ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရေနံတူးစင်တွေ ပေါက် ကွဲလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရေနံထုတ်လုပ်တဲ့ နိုင်ငံတွေက ရေနံဈေးကစားဖို့ရေ နံတွေကို သွန်ပစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ရေ နံယိုဖိတ်မှုတွေ များပြားလာနေပြီး ပင်လယ်ရေညစ်ညမ်းလာစေမှုဟာ လည်း ပင်လယ်တွင်းအသက်ရှင် နေရတဲ့သတ္တဝါတွေနဲ့ ငါးတွေရဲ့ အသက်အန္တရာယ်ကို ခြိမ်းခြောက် လာခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်က Exxon Valdex ရေနံစင်ပေါက်ကွဲ မှု၊ ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှာ အီရတ်နိုင်ငံက ရေနံတွေကို ဂတ်(ဖ်)ပင်လယ်ကွေ့ အတွင်း သွန်ပစ်မှုတွေ ကမ္ဘာကသ တိပြုလာမိပြီး အဲဒီအန္တရာယ်က ကာကွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းလာခဲ့ကြပါ တယ်။
၁၉၉၀ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ မှာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ဟာရေနံ ညစ်ညမ်းမှုမဖြစ်ပွားရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြစ်ပွားလာ ရင် လျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်ပြီး အချင်း ချင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်တစ် ရပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရေနံယိုဖိတ်မှုဟာ ပင်လယ် ရေညစ်ညမ်းမှုကို ဖြစ်ပွားစေသလို မိလ္လာအညစ်အကြေးတွေနဲ့ စက်မှု လုပ်ငန်းတွေက စွန့်ပစ်တဲ့ရေဆိုး တွေရဲ့ အန္တရာယ်ဟာလည်း ပင်လယ်ကမ်းစပ်ဒေသတစ်လျှောက် ကရေထုကို အဓိကညစ်ညမ်းနေစေ ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ပင် လယ်တွင်းအညစ်အကြေးစွန့်ပစ် တာကို ပိတ်ပင်တားမြစ်တဲ့ဥပဒေ (The Ocean Dumping Ban Act)ကို ၁၉၈၈ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့ ပြီး မိလ္လာအညစ်အကြေးနဲ့စက်မှု စွန့်ပစ်ရေဆိုးတွေကို ၁၉၉၂ခုနှစ် ဇွန်လကစပြီး ပင်လယ်တွင်းစွန်ပစ် ခွင့်မပေးတော့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ မိလ္လာအညစ်အကြေးတွေကို ဓာတ် မြေဩဇာအဖြစ် ပြန်လည်ထုတ်လုပ် စေပြီး၊ စက်မှုစွန့်ပစ်ရေဆိုးတွေကို မြေအောက်ပေးပို့ခြင်း၊ အချို့အမှိုက် တွေကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းတွေကို ဆောင်ရွက် လာနေကြောင်းပါ ခင် ဗျား။ ။
Posted by Xai Yak at 11:16 No comments:
လေကြောင်းလိုင်း များတွင် မိုဘိုင်းလ်နှင့် ပက်သက်သည့် စည်းကမ်းချက်များ ထုတ်ပြန်မည်
ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်း များတွင် လေယာဉ်စီးနင်းသူများ အတွက် ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာ များ ဖြစ်သော မိုဘိုင်းလ်ပစ္စည်း များနှင့်ပတ်သက်သည့် စည်းကမ်း ချက်များကို ထပ်မံ၍ ထုတ်ပြန်ပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့လေ ကြောင်းမှ သိရသည်။ ပြည်တွင်းတွင် GSMဖုန်း၊ CDMA ဖုန်းများနှင့် Apple Product များ ကဲ့သို့သော မို ဘိုင်းလ်ဆက်သွယ်ရေး ကိရိယာ များကို သုံးစွဲသူများပြားလာသည့် အတွက် လေကြောင်းလိုင်းများ အနေဖြင့် မိုဘိုင်းလ်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်သော စည်းကမ်းချက် များလို အလေးထားရမည့်ကိစ္စ တစ်ခုဖြစ်လာကြောင်း မြန်မာ့ လေကြောင်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး ကဆိုသည်။ လေကြောင်းလိုင်းများတွင် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများနှင့် ပတ်သက် သည့် စည်းကမ်းချက်အနေဖြင့် လေယာဉ်စီးနင်းစဉ် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အသုံးပြုခြင်းမပြုရဆိုသည့် စည်း ကမ်းချက်ကို ထုတ်ပြန်ထားသည် ဟုသိရသည်။ လေယာဉ်စီးနေစဉ် မိုဘိုင်းလ် ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများ အသုံး ပြုခွင့်မပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာ့လေကြောင်းမှ တာဝန်ရှိသူ က "Apple Product တွေအပါ အဝင် Mobile Phone တွေကို လေယာဉ်စီးနေစဉ်မှာ အသုံးပြု ခွင့်မပေးရတာက အဲဒီဆက်သွယ် ရေးပစ္စည်းတွေက ရေဒီယိုလိုင်း ကို ဖမ်းယူနိုင်သလို ထုတ်လွှင့်နိုင်တဲ့ Radio Deviceတွေဖြစ်တဲ့အ တွက် လေယာဉ်မောင်းနေတဲ့ လေယာဉ်မှူးရဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ကိရိ ယာကို အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင် လို့ပါ။
လေယာဉ်မှူးရဲ့ ဆက်သွ ရေးကိရိယာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ် သွားမယ်ဆိုရင် ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းပြောင်းပြီး လေယာဉ် လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခုလို မိုဘိုင်းလ် အသုံးပြုသူတွေများ လာတဲ့အချိန်မှာ လေကြောင်း လိုင်းကို အနှောင့်အယှက် မဖြစ် အောင်လို့ မိုဘိုင်းလ်နဲ့ ပတ်သက် တဲ့ စည်းကမ်းတွေကို ဂရုတစိုက် ထုတ်ပြန်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်" ဟုပြောကြားသည်။ လေယာဉ်စီးနေစဉ် မိုဘိုင်းလ် ဖုန်းအသုံးပြုခြင်းသည် လေယာဉ် တစ်စီးလုံးကိုပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်စေ နိုင်သည်ဟူသော အချက်သည် လည်း မှန်ကန်မှုမရှိကြောင်း လေ ကြောင်းလိုင်းအချို့မှ သိရသည်။ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတစ်လုံး၏ လေယာဉ် အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ Auto Net Travels Company မှ Managing Director ဦးဌေးမြင့်က လေယာဉ် ပေါ်မှာ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းသုံးလို့ လေ ယာဉ်ပေါက်ကွဲနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အ ချက်ကမမှန်ပါဘူး။ လေယာဉ်စီး နေစဉ်မှာ ဖုန်းအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ရေဒီယိုလှိုင်း ကွန်ရက်ဖြစ်ပေါ်နိုင် တဲ့အတွက် လေယာဉ်မှူးရဲ့ ဆက် သွယ်ရေးကျတဲ့အထိ အန္တရာယ် ကြီးနိုင်ပါတယ်"ဟုပြောကြားသည်။ ပြည်တွင်းတွင် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အသုံးပြုသူများသကဲ့သို့ လေ ကြောင်း လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ လည်း ကောင်းမွန်လာသည့်အ တွက် ပြည်တွင်း သယ်ယူပို့ဆောင် ရေးလုပ်ငန်း များတွင် လေကြောင်း လိုင်းကို အသုံးပြုသူများပြားလာ မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့လေ ကြောင်းမှ တာဝန်ရှိသူက သုံးသပ် သည်။.
Posted by Xai Yak at 11:09 No comments:
အခုပြောပြမှာကတော့ Browser Error တွေနဲ့ပက်သတ်လို့ပါ။ Browser ဆိုတာကတော့ Webside
တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ အသုံးပြုတဲ့ Web Browser ကိုပြောတာပါ။
ဥပမာ ... Internet Explorer , Mozilla Firefox , Flock တို့စသဖြင့်ပေါ့။ ၎င်း Browser တွေအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ ဖြစ်တက်တဲ့ Error လေးတွေ အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။
Browser Error တွေကတော့ Browser တိုင်းမှာဖြစ်တက်ပါတယ်။ Browser Error Message ကို တကယ်တော့ HTTP Status Codes လို့ခေါ်ပြီး Web Page တွေကို Loading
လုပ်တဲ့အခါမှာ တွေ့ရတဲ့ Error အမျုိုးအစားတွေပါ။ အတွေ့များတဲ့ Browser Error တွေနဲ့ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
400 Bad Request browser error ကတော့ Website Server ဆီကို web page တွေ Load လုပ်ဖို့ Request တွေပေးပို့တဲ့အခါမှာ ၎င်း Server ကနေ request ကို
process မလုပ်တဲ့အခါ ၊ Request ကိုနားမလည်တဲ့အခါတွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ Error ပါ။ ဒီ Error ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့
" 400: Bad Request " (or)
" HTTP Error 400 - Bad Request "
ိ့ဆိုပြီးခေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ 400 Bad request Error က URL ကို မှားရိုက်လို့သော်လည်းကောင်း ၊ URL ကို Point လုပ်ထားတဲ့ Link က မှားနေ၍သော်လည်းကောင်း
ဖြစ်တက်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက Web Side မှားရိုက်လို့ (or) Web Side Link ကို Point လုပ်ထားတာ မှားနေလို့ ဖြစ်တက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိကြည့်လိုတဲ့ Web Side ကို
401 Unauthorized Error ကတော့ Webside တွေကို ၀င်ရောက်သုံးစွဲတဲ့အခါတွေမှာ ပထမဦးဆုံး Log on ၀င်တဲ့အခါတွေမှာ ဖြစ်တက်တဲ့ Error မျိုးပါ။ အကယ်လို့ Log on
၀င်ဝင်ချင်း 401 Error ကိုရရှိတာဆိုရင်တော့ မိမိဝင်လိုက်တဲ့ Credential (မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း) ကအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် လွဲမှားနေလို့ပါ။ ဒါကြောင့် User name နဲ့
Password ကို သေချာစွာရိုက်ထည့်ပါ။ URL က Valid ဖြစ်တာသေချာတယ်ဆိုရင်တော့ Website ရဲ့ Main page ကိုသွားပြီး Login (or) Secure Access
အကြောင်းကိုပေးထားတဲ့ Link ကိုရှာဖွေပါက ၎င်းနောက် မိမိရဲ့ Credential နဲ့ တဖန်ပြန် try ကြည့်ပါ။
403: Forbidden Error
403: Forbidden Browser Error ကတော့ URL က Web page အစား directory ကို Point လုပ်ထားတဲ့အခါမှာ ဖြစ်တက်ပါတယ်။ အကယ်၍ မိမိရောက်ရှိဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့
page က မှန်ကန်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ Error က အခြား mistake ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် အကောင်းဆုံးကတော့ webmasden ကို အမြင့်ဆုံးဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
404: Not Found Error
ဒီ Error က တော်တော်များများမှာတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ Error မျိုးပါ။ 404 Error တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်း Error တွေပေါ်တက်ပါတယ်။
404 Error ကတော့ မိမိဝင်ရောက်အသုံးပြုဖို့ ကြိုးစားတဲ့ Web page က Website ရဲ့ Server မှာမတွေ့လို့ပါ။ 404 Error တွေ့လို့ရှိရင်တော့ Refresh / Reload button
ကိုနှိပ်ပြီး web page ကို Retry လုပ်ပါ။ ၎င်းနောက် address bar မှာ URL ကို ထပ်ရိုက်ပြီး ပြန်ဝင်ကြည့်ပါ။ ဥပမာ “ www.w.com/a/b/c.htm ဆိုပြီးဝင်လိုက်လို့ 404 Error
not found လို့ပြနေတယ်ဆိုရင် www.w.com/a/b လို့ရိုက်ထည့်ပါ။ အဲဒါမှမရသေးရင် တစ်ဆင့်ပြန်လျော့ပြီး www.w.com/a လို့ရိုက်ထည့်ပြီးပြန်ဝင်ကြည့်ပါ။
408: Request Timeout Error
403 Error ကတော့ web page တွေကို Loading လုပ်တဲ့အခါမှာ website ရဲ့ Server က ပြင်ဖို့စောင့်ရတဲ့အချိန်ထက် အချိန်ကြာမြင့်စွာပိုယူလို့ဖြစ်ပေါ်တက်တဲ့ Error ပါ။
ဆိုလိုတာက မိမိ Website ရဲ့ Connection က timeout ဖြစ်သွားတာပါ။ Error ဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင်တော့ Refresh ပြီးပြန် try ပါ။ Address bar မှာ address ကို ပြန်ရိုက်ပြီး
ပြန်စစ်ကြည့်ပါ။ Slow connection ခဏခဏဖြစ်ရင်လည်းပဲ တစ်ရံတစ်ခါမှာ ဒီလို Error မျိုးဖြစ်တက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် connection ကိုလည်းစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
500 Bad Server Error ကတော့ ယေဘုယျအားဖြင့် အတွေ့ရများပါတယ်။ ဒီ Error မျိုးကတော့ Website ရဲ့ Server က ချွတ်ယွင်းသွားတဲ့အခါတွေမှာ တွေရှိရပါတယ်။
Server ဘက်က Error ပါ။ မိမိရဲ့ PC (or) Internet Connection နဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မကြာခဏ Refresh လုပ်ကြည့်ပြီးသုံးပါ။
502: Bad Gateway Error
502 Bad Gateway Error ကတော့ Server တစ်ခုကနေ web page တွေကို accessing လုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ အခြား Server ကနေ invalid response ကိုလက်ခံရရှိချိန်
(or) Browser ကအခြား request တွေကို ဖြည့်တဲ့အခါတွေမှာ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိတာပါ။ 502 Error က Internet ပေါ်မှာရှိတဲ့ Server တွေကြားက network ဖြစ်တာကြောင့် မိမိ PC
တွေ ၊ Internte connection တွေနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ ဒါက Server ဘက်ကဖြေရှင်းရမယ့် ကိစ္စပါ။ ဒါကြောင့်ခဏလောက်စောင့်ပြီး မိမိလုပ်လို့ရတာကတော့ Refresh button ကို
ခဏခဏနှိပ်ပြီး web page ကို ပြန် try ဖို့ပါ။
503: Service Unavailable Error
503 Error ကတော့ ခဏလောက်ပဲ Web Site Server ကိုမတွေ့ရှိခြင်းပါ။ ဒီ Error မျိုးဖြစ်ပါက Server ကို Maintenance လုပ်နေချိန် (or) temporaty overloading
Posted by Xai Yak at 11:59 No comments:
ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ Network အသုံးပြုကြတဲ့အခါမှာ Wire Base Connection တွေကိုလည်း သုံးကြသလို၊
Wireless Network Connection တွေကိုလည်း အသုံးပြုကြပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် Wireless Connection
တွေကို အသုံးပြုတာ ပိုများလာကြပါပြီ။ Wireless Network ကို အသုံးပြုမှတော့ သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Problem တွေလည်
ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ ဒါကြောင့် Wireless Network နဲ့ပတ်သက်လို့
ဆိုတာကတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် တွေ့ရှိပုံခြင်း တူကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် Wireless Network
နဲ့ပတ်သက်လို့ ပြဿနာတွေ ကြုံလာရပြီ။ Connection မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်းသာ ဆောင်ရွက်ကြပါ။
ပထမဦးဆုံး Troubleshooting မလုပ်ခင်
- ဘာပြဿနာလဲ။ ပြလာတဲ့ Error Message ကို သေချာစွာ လိုက်မှတ်ပါ။
- ဘာ Wireless Card ကို အသုံးပြုထားသလဲ။
- Wireless Card ရဲ့ Driver Version က ဘာလဲ။ Device Manager ထဲမှာ သွားကြည့်ကြပါ။
- ဘယ် Wireless Access Point ကိုသုံးသလဲ။
- Windows (သို့မဟုတ်) Third-Party Program တွေကို အသုံးပြုပြီး Wireless Setting Program တွေ
Third-Party Program ကို သုံးရင်လည်း ဘယ် Program ကိုသုံးလဲ။ Version က ဘယ်လောက်လဲ။
- Wireless Zero Configuration က Running ဖြစ်နေလား ဆိုတာတွေကို သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၁။ Wire and Wireless Network Adapter ကို စစ်ဆေးခြင်း
Router ကို Plugged ထိုးထားတဲ့ Wires တွေကို စစ်ဆေးပါ။ Power Cord က ချိတ်ဆက်ထားတယ်ဆိုရင် Router နဲ့
Cable/ DSI Modem တွေက မီးလင်းရဲ့လား။ နောက်ထပ် Wireless Network Adapter တွေရော၊ Switch က "On"
ထားရဲ့လား စတာတွေကို စစ်ဆေးပါ။ တစ်ချို့ Laptop တွေမှာတော့ OS ကနေ ၎င်းတို့ကို Enable လုပ်ဖို့အတွက် Red (or)
Blue Button လေး ပါရှိပါတယ်။ Windows မှာဆိုရင် Device Manager ကို သွားပြီး Wireless Network Adapter ကို
အသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုရင် Windows က Run နေတုန်းမှာ ၎င်းကို ပြန်ဖြုတ်ပြီး ပြန်တပ်လိုက်ပါ။ Detect ပြန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
၂။ Driver Compatibility ဖြစ်ရဲ့လား။
မိမိအသုံးပြုတဲ့ Wireless Network Adapter အတွက် မှန်ကန်တဲ့ Device Driver ကို Install လုပ်ထားရဲ့လား
ဆိုတာကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒီလို မှန်ကန်တဲ့ Device Driver ကို Install လုပ်မထားခြင်းက Problem တွေ
အများကိုဖြစ်စေပြီး ဘာ Function မှ အလုပ်မလုပ်ဘဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Device Driver ကို မှန်ကန်စွာ Install
၃။ Signal Strength နည်းနေခြင်း
Access Point ရဲ့ Signal Strength က Low ဖြစ်နေခြင်းဟာလည်း Network ရဲ့ Performance ကို
အများကြီးပြောင်းလဲစေပါတယ်။ Cordless Phones ၊ Microwaves နဲ့ အခြားသော Electrical Equipment တွေကို
Point နဲ့ အနည်းဆုံး 1m အဝေးမှာထားဖို့ ဂရုပြုပါ။ Wireless Access Point ကို Channel ပြောင်းဖို့ ကြိုးစားပါ။ ပြီးတော့
တစ်လုံးလုံးနဲ့ Test လုပ်ပါ။ Access Point မှာ Radio Channel Change ဖို့အတွက် ပထမဆုံး Access Point ထဲမှာ Log
၎င်းနောက် Wireless Setting Section ကိုသွားပြီး နောက်ထပ်မတူညီတဲ့ Channel တစ်ခုကို ရွေးပါ။ ၎င်းနောက် Setting
လုပ်လိုက်ပါ။ Client မှာ Device Manager ကိုသွား၊ Wireless Network Adapter ကို Right Click နှိပ်ပြီး Properties ကို
Advanced Tap မှာ Channel Property ကို ရွေးပြီး Value ကိုလည်း မိမိ Wireless Access Point ရဲ့ Value နဲ့
Wireless Connection ကို Disable လုပ်ပြီး၊ ပြန်လည် Enable လုပ်လိုက်ပါ။
ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက Signal Strength နည်းလာလို့ရှိရင် ရုံးမှာ Physically အရ ဘာမှမပြောင်းလဲနဲ့။ Hardware
ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ မပြောင်းလဲဘဲနဲ့ Wireless Access Point တွေနဲ့ Client တွေမှာ Channel ကို ပြောင်းကြည့်မယ်။
Strength အား ကောင်းလာလိမ့်မယ်။ အရင်ဆုံးတော့ Client တစ်လုံးလောက်နဲ့ပဲ Channel ကို ပြောင်းစမ်းကြည့်ပေါ့။
၄။ Access Point Location
Wireless Network အသုံးပြုပြီဆိုရင်တော့ Access Point Antenna ရဲ့ Location ထားရှိမှုကလည်း
ဒါကြောင့် Access Point ရဲ့ Antenna ကို Side Ways (သို့) Downwards ထားမှာလားဆိုတာကို သေချာစဉ်းစားပါ။
ပုံ(၇) ရဲ့အောက်က (Antenna Pointing Upwards (Default) လို့ရေးပါ။)
ပုံ(၈)ရဲ့အောက်က (Antenna Pointing Side Ways) လို့ရေးပါ။
၎င်းနောက် Access Point ရဲ့ Location ကလည်း အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် Access Point ကို Central
Location (ဗဟိုနေရာ) မှာ ထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ၎င်းအပြင် Access Point ကို တတ်နိုင်သလောက် Physical အရ
ဟန့်ထားမှုတွေနဲ့Reflective Surface တွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးရပါမယ်။
၅။ Installing arepeater foraperformance boost
Signal Strength က အားနည်းလို့ အားကောင်းအောင် ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ Access Point နဲ့ Client (PC or
Laptop) ကြားမှာ Repeater ကို ထားရပါမယ်။ Repeater ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်က ၀င်လာတဲ့ Weak Signal တွေကို
လုပ်ပြီး Signal အား ပြန်ကောင်းအောင် ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် Access Point နဲ့ အရမ်းဝေးသွားတဲ့ Client
တွေအတွက်ဆိုရင် Access Point နဲ့ ၎င်းတို့အကြားမှာ Repeats ထားရှိသင့်ပါတယ်။
၆။ Wireless Zero Configuration Service ကိုရော Run ထားလား။
Wireless Zero Configuration Service ကို Run ထားရဲ့လား သေချာစစ်ဆေးပါ။ အကယ်၍ Wireless Zero
Configuration Service ကို Run မထားရသေးဘူးဆိုရင်လည်း အောက်ပါအတိုင်း ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါ။
Start>Run Box မှာ cmd လို့ရိုက်ထည့်ပါ။ OK ကို နှိပ်ပါ။
Command Prompt Box ကျလာပါမယ်။ ၎င်းနောက် sc query wzcsvc လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။
Windows Zero Configuration Service က Run နေတယ်ဆိုရင်တော့ STATE မှာ RUNNING ဆိုပြီး ပြနေပါလိမ့်မယ်။
My Computer ကို Right Click နှိပ်ပြီး Manage ကို ထပ်နှိပ်ပါ။
Computer Management Box ကျလာတဲ့အခါမှာ Services and Application အောက်က Services ကိုနှိ်ပ်ပါ။
Wireless Zero Configuration ကို တွေ့တဲ့အခါ၊ ၎င်းကို Right Click နှိပ်ပြီး Properties ကိုသွားပါ။
၎င်းနောက် Startup Type မှာ Automatic ထားပြီး Start ဆိုတာကို နှိပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် Wireless Zero Configuration
SSID (Service Set Identifier) ကို သတိထားဖို့ လိုပါတယ်။ မိမိက Laptop ကို သွားလေရာ ယူသွားတယ်။
ရောက်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ Wireless Network နဲ့ ချိတ်ဆက်တယ်။ အဲဒီလိုချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာ မိမိချိတ်ဆက်တဲ့ Wireless
Network ရဲ့ SSID ကို ကိုယ့်ရဲ့ Laptop ရဲ့ SSID မှာထည့်ပြီး အသုံးပြုရပါတယ်။ အဲဒီလို မိမိအသုံးပြုတဲ့ Wireless
Network နဲ့ SSID အလိုက် ပြောင်းပြီး Network ချိတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် SSID ကို သတိထားဖို့လည်း လိုပါတယ်။
မှန်ကန်တဲ့ SSID ကို မသတ်မှတ်ထားဘူးဆိုရင်လည်း Access Point နဲ့ မိမိ Laptop နဲ့ Ping လို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ပုံ(၁၇) ပုံ(၁၈) ပုံ(၁၉) ပုံ(၂၀)
Wired Equivalent Privacy (WEP) ရဲ့ Encryption Configuration ကိုလည်း စစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အကယ်လို့
WEP Configuration တွေမှားနေရင်လည်း Wireless Client ကနေ Wireless Access Point ဆီကို "Ping" လို့ရမှာ
မဟုတ်ပါဘူး။ မတူညီတဲ့ NIC နဲ့ Access Point တိုင်းမှာ မတူညီတဲ့ WEP Encryption Key တွေ သတ်မှတ်ပေးဖို့
လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာ... တစ်ချို့ Brand တွေက Hex Format သုံးဖို့လိုအပ်သလို၊ တစ်ချို့ Brand တွေက Decimal
Format တွေ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တစ်ချို့က 40-Bit ကို Support လုပ်သလို၊ တစ်ချို့က 64-Bit ကို Support
Posted by Xai Yak at 11:08 No comments:
Web Bot ဆိုတာဟာ အင်တာနက် Bot ဆော့ဖ်ဝဲ program ဖြစ်ပြီး keywords များအား track လိုက်ခြင်း၊ လုပ်ဆောင်ချက်များအား မှတ်သားခြင်း စတာတွေအသုံးပြုတဲ့ program တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Web Bot ကို Internet Bot လို့လည်း ခေါ်ဝေါ်ကြပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ 1997 ခုနှစ်မှစတင်၍ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အစကတော့ Wet Bot မျာအား စတော့ဈေးကွက်များအား ခန့်မှန်းတွက်ချက်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ပြီး ပထမဆုံး Web Bot တစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့သူကတော့ Clif High နှင့် George Ure တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးဟာ ဆန်းသစ်သောနည်းပညာများ၊ algorithm များကို အသုံးပြုပြီး Web Bot များကို တီထွင်ဖန်တီးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Clif High နှင့် George Ure တို့နှစ်ဦးဟာ Web Bot များကို ရေးဆွဲဖန်တီးခဲ့ပြီးနောက် Search Engine များတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုလာပါတယ်။ ထို Web Bot များဟာ Crowd နှင့် Spider တို့ကဲ့သို့သော Search keyword များကို ရှာဖွေရာတွင် အဓိက အစိတ်အပိုင်းမှ ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ နေ့စဉ်အသုံးပြုလျှက်ရှိသော Search Engine များဟာ Crowd နှင့် Spider လို့ခေါ်တဲ့ keyword များကို Search Engine နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော နည်းပညာများကို အသုံးပြု ကာ တည်ဆောက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ Web Bot များပေါ်ထွက်လာခဲ့ခြင်းကြောင့် 300,000 မျှသော keyword များကို အချိန်ပိုင်းအတွင်း ရှာဖွေလာနိုင်ခဲ့ပြီး ၀က်ဘ်အသုံးပြုမှုအတွက် အဓိက အထောက်အကူဖြစ်သော programများ အဖြစ် အသုံးပြုလာခဲ့ကြပါတယ်။
Web Bot များအား အခြားသော အသုံးပြုမှုများကတော့ ဈေးကွက်ရှယ်ယာများ ခန့်မှန်းခြင်း ၊ အဖြစ်အပျက်များအား ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်း တို့အတွက်ပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အချို့သောသူတွေကတော့ Bot များရဲ့ တွက်ချက်ခန့်မှန်းမှု အားယုံကြည်ကြပြီး အချို့ကတော့ Bot များကို ဈေးကွက်ခန့်မှန်းစရာ အဓိကအရာလို့ မမြင်ကြပါဘူး။ Web Bot များနှင့်ပက်သက်၍ အမှတ်ရစရာတစ်ခုကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ 2001 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Tu-154 Jetliner crash ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းအား Web Bot မှ ရက် 90 မတိုင်မှီကတည်းက ခန့်မှန်းတွက်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ Bot နှင့်ပက်သက်လို့ မယုံကြည်နောက်သော တွက်ချက်မှုများ၊ ရှိနေပေမဲ့ လူသားတို့အနေဖြင့် Bot ကို ယုံကြည်အားထားရာ တစ်ခုအဖြစ်တော့ မသတ်မှတ် သေးပါဘူး။
Posted by Xai Yak at 14:55 No comments:
Computer ရဲ့ Hard Drive တွေဟာ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဘာ Warning Box မှ မပြဘဲနဲ့ Fail ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ရုတ်တရက် Fail ဖြစ်သွားတဲ့အခါ System ကြီးဟာ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ရုတ်တရက် Crash ဖြစ်သွားတဲ့အခါတွေမှာ ကိုယ့်ရဲ့ Hard Disk ထဲမှာ သိမ်းထားတဲ့ Data တွေဟာ Loss ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ Data တွေဟာ ကိုယ့်အတွက်၊ ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းအတွက် အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ VIP Data တွေ ဖြစ်နေရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ အရင်တုန်းကဆိုရင်တော့ စာအုပ်ကြီးတွေနဲ့ တစ်ခါမှတ်၊ Computer မှာ တစ်ခါမှတ် အဲဒီလိုတွေ မှတ်ကြတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ခုနက ပြောခဲ့သလိုပဲ Hard Disk က တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် Crash ဖြစ်သွားခဲ့ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ စာအုပ်တွေကရော ဥပမာဗျာ..မီးလောင်ပါပြီတဲ့၊ ရေကြီးပါပြီတဲ့.. အဲဒီလို ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာရင် စာအုပ်တွေကို ဘယ်လိုသယ်မလဲ။
စာအုပ်တွေက အများကြီး၊ အလေးကြီး၊ ပြီးတော့ ကရိကထလည်း များသေးတယ်ဗျာ။ ဒါ့ကြောင့် ဒီပြဿနာတွေ ပြေလည်စေဖို့အတွက် နောက်ပိုင်းမှာ Back Up System ကို Computer တွေမှာ စတင်အသုံးပြုလာကြတယ်။ Back Up လုပ်တယ်ဆိုတာ အပိုပွားထားတာပဲဗျ။ Data တွေ၊ Information တွေကို အပိုထပ်ပွားထားတာမျိုးကို Back Up လုပ်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အကယ်၍ Data တွေ၊ Fail ဖြစ်သွားရင်တောင် အပိုပွားထားတာရှိတော့ စိတ်မပူရတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ ပြီးတော့ Back Up လုပ်ရင် Removeable Device တွေမှာပဲ လုပ်ရပါတယ်။ ဒါမှ အရေးရယ်၊ အကြောင်းရယ်ဖြစ်ရင် ရုတ်တရက် ကောက်ထည့်သွားလို့ရမှာပေါ့။ ဥပမာ- ကျွန်တော်က ကျွန်တော်ရဲ့ Hard Drive ထဲမှာ အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ Data တွေကို ထည့်ထားတယ်ပေါ့ဗျာ။ ပြီးတော့ အဲဒီ VIP Data တွေကို CD တစ်ချပ်နဲ့လည်း Back Up လုပ်ထားသေးတယ်ဆိုပါတော့။ အဲဒီအချိန်မှာ ရုတ်တရက် မီးလောင်ပါပြီတဲ့၊ ကျွန်တော်ရဲ့ အရေးကြီး File တွေ၊ Data တွေရှိတဲ့ Computer ကြီးကို ဘယ်လိုသယ်မလဲ။ သယ်လို့လည်း မရတော့ဘူးဆိုရင်ရော ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်မှာ VIP Data တွေကို Back Up လုပ်ထားတဲ့ CD ရှိနေတာပဲ။ အဲဒါလေး အိတ်ထဲကောက်ထည့်ပြီး သွားရုံပဲပေါ့ဗျာ။ အဲဒါ Back Up လုပ်ထားခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လည်း ဖြစ်သလို အကျိုးကျေးဇူးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်နေရာမှာ Backup လုပ်မလဲ CD or DVD
သင့်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ Data တွေ၊ VIP Information တွေကို Removeable Device အမျိုးအစားထဲမှာပါတဲ့ CD ၊ ဒါမှမဟုတ် DVD တွေနဲ့ Back Up လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ Back Up လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ Re-Writable CD/DVD တွေကို အသုံးပြုတာက ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါမှ သင့်အနေနဲ့ Back Up လုပ်တိုင်း CD/DVD အသစ်တွေကို မလိုအပ်တော့ပါဘူးပေါ့ဗျာ။ နို့မို့ဆိုရင် Back Up တစ်ခါလုပ်တိုင်း၊ CD/DVD တစ်ခါဝယ်ရရင် ဘယ်လွယ်ပါ့မလဲဗျာ။ ဒါ့ကြောင့် Re-Writable CD/DVD တွေကို အသုံးပြုပြီး Back Up လုပ်တာက အကုန်အကျသက်သာပြီး၊ လွယ်ကူမှုရှိတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲဗျာ။
Internal (or) External Hard Drive -Recommended
အကယ်၍ သင့်ရဲ့ Computer မှာ Hard Drive နှစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် 2nd Internal Hard Drive ပေါ်မှာ သင့်ရဲ့ File တွေကို Back Up လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်မှာ Internal Hard Drive နှစ်ခုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်း Internal Hard Drive တစ်လုံးထပ်ထည့်ရတာ လွယ်ပါတယ်။ External Hard drive တွေကတော့ ဈေးနှုန်းချိုသာတဲ့အပြင် သုံးရတာလည်း လွယ်ကူပါတယ်။ ပြီးတော့ External Hard Drive အားလုံးနီးပါးလောက်ဟာ Plug and Play Format တွေချည်းပါပဲ။ ပြီးတော့ Back Up File တွေကို ပြုလုပ်ပေး၊ ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ Software တွေလည်း ပါရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော် သေသေချာချာ အာမခံနိုင်တာ တစ်ခုကတော့ ဒီနည်းလမ်းနဲ့လည်း Back Up လုပ်ထားတာတွေကို သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ လွယ်ကူမှုလည်း ရှိသလို၊ ဈေးနှုန်းလည်း သက်သာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီနည်းလမ်းကိုတော့ Computer Back Up လုပ်ဖို့အတွက် သင့်တော်တဲ့ ဒုတိယဦးစားပေးနည်းလမ်းအဖြစ် ရွေးချယ်လိုက်ရပါတယ်။
နောက်ထပ် Back Up လုပ်လို့ရတဲ့ နေရာကတော့ Zip Drive ပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် Zip Drive ကို ၀ယ်ယူပြီး Computer ထဲမှာ Install လုပ်ထားရမှာပါ။ အဲ..ဒါပေမယ့် Zip Drive နဲ့ Tape တွေဟာ ဈေးအလွန်ကြီးပါတယ်။
ဘယ်နေရာတွေမှာ၊ ဘယ်လို Drive တွေပေါ်မှာ Back Up လုပ်ရမလဲဆိုတာကို ပြောပြပြီးပြီဆိုတော့ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ဘယ်လို Back Up လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို ပြောပြပါ့မယ်။ OK ဒါဆိုရင် စလိုက်ကြရအောင်ဗျာ။
Window Back Up Utility
Window Back Up Utility ဆိုတာဟာ သင့်ရဲ့ အရေးကြီး Data တွေကို Back Up ပြုလုပ်နေစဉ် တစ်လျောက်မှာ ဘာတွေ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို Guide လုပ်ပေးမယ့် အရာဖြစ်ပါတယ်။
* အရင်ဆုံး Start ကို Click နှိပ်ပါ။ ပြီးရင် အဲဒီထဲက All Program ကို ရွေးပေးပါ။ ပြီးတဲ့အခါမှာ All Program ရဲ့ အောက်က Accessories ၊ Accessories ရဲ့အောက်က System Tools စသဖြင့် အဆင့်ဆင့်ရွေးသွားပါ။ ပြီးရင် System Tools ထဲက Back Up ပေါ်မှာ Click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် First Screen ပေါ်က Next ပေါ်မှာ Click ထပ်နှိပ်လိုက်ပါဦး။
* အဲဒီလို လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ "What you want to back up" ဆိုတဲ့ စာတန်းလေးကို ရွေးချယ်ပေးရပါမယ်။ ပြီးရင် "Everyone's Document" ဒါမှမဟုတ် "What to back up" ဆိုတဲ့ စာတန်းလေးကို ထပ်ရွေးပေးလိုက်ပါဦးဗျာ။
* ဒါဆိုရင်တော့ အဲဒီနောက်မှာ သင်ဟာ Summary Page တစ်ခုပေါ်ကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါကျရင် "Advanced" ဆိုတဲ့ Button ပေါ်မှာ Click တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနော်။ မှားပြီးတော့ "All information on this computer" ဆိုတဲ့ Button ကိုတော့ သွားမရွေးလိုက်ပါနဲ့နော်။ မှားလိမ့်မယ်။
* ပြီးတဲ့အခါ အဲဒီ Schedule တစ်လျောက်လုံးကို Set Up လုပ်နိုင်ပြီး Back Up Type ကိုလည်း Normal Back Up လို့ ပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်။ "Verify Data After Back Up" (သို့) "Disable Volume Shadow Copy" ဆိုတဲ့ Button တွေကို ရွေးချယ်စရာ မလိုပါဘူး။ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရရင်တော့ Back Up လုပ်ထားတဲ့ Data တွေကို ပြန်စစ်စရာ မလိုဘူးပေါ့ဗျာ။
အရေးကြီး File တွေ၊ Data တွေကို Back Up လုပ်နေတဲ့အခါမှာ Control လုပ်ပေးဖို့အတွက် ခွင့်ပြုထားတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးဝင်တဲ့ Batch File တစ်ခုကို ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Start ထဲက Program ၊ Program ထဲက Accessories နဲ့ Accessories ထဲက Notepad ဆိုပြီး အဆင့်ဆင့် ရွေးချယ်သွားပါ။ ပြီးရင်တော့ File ကို သိမ်းတဲ့အခါမှာ ".bat" file ဆိုပြီး သိမ်းပေးပါ။ ဒီလောက်ဆိုရင် ရပါပြီ။ အဲ ပြီးတော့ Batch File ထဲမှာ Xcopy ကို အသုံးပြုပြီး Harddrive တို့၊ Flash Drive တို့လို Location တွေရဲ့ တိကျတဲ့ Directories တွေကို Copy လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ အကယ်၍ သင့်မှာ ပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့ Batch File ရှိနေပြီဆိုရင်တော့ Control Panel>Performance & Maintenence>Scheduled Tasks ဆိုပြီး အဆင့်ဆင့် လမ်းကြောင်းရွေးပြီး အစီအစဉ်ကျတော့ အလုပ်တွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Xai Yak at 14:31 No comments:
Intel မှ ၎င်း၏ Pentium 133-200 MHz Processor များနှင့် အသုံးပြုနိုင်စေရန်အတွက် Socket7ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့ပြင် Pentium MMX Processor များနှင့်ပါ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်စေပြီး Dual Plane Voltage ကို Support လုပ်နိုင်သော Socket အသစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထို Socket ဟာ Voltage အမျိုးမျိုးကို Processor Core နှင့် I/O Logic ဆီသို့ပေးပို့နိုင်ပြီး ယခင် Single Voltage Processor များနှင့်ပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ထို့နောက် Intel မှ မျိုးဆက်သစ် Processor များ ထုတ်လုပ် အသုံးပြုနိုင်စေရန်အတွက် Slot 1 ဟုခေါ်သော
Socket အမျိုးအစားတစ်မျိုးကို စတင် အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းဟာ Socket7နှင့်မတူညီတာကြောင့် အခက်အခဲအနည်းငယ်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Intel ၏ ပြိုင်ဘက်များမှ Socket7ကို Support လုပ်သော Device များကို ဆက်လက် ထုတ်ဝေခဲ့ကြပါတယ်။ ထို့ပြင် ၎င်းတို့ဟာ "Super Socket 7" အသစ်ကိုတီထွင်အသုံးပြုကြပြီး ၎င်းဟာ Bus Frequency 100 MHz ကို Support လုပ်ပါတယ်။ Socket7ဟာ 321 Pin Hole များပါဝင်ပြီး 37x37 Pin အနေဖြင့် Arrange ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ၎င်း၏ အရွယ်အစားမှာ Socket5နှင့် ဆင်တူပြီး Socket5ကတော့ Pin Hole 320 သာပါဝင်ပါတယ်။ Socket7တွင်
အပိုပါဝင်လာသော Pin တစ်ခုဟာ အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာအရချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိပဲ Socket5Motherboard များအတွင်း အသုံးမပြုနိုင်စေရုံမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။
AMD K5 (75 MHz- 200 MHz)
AMD K6 (166 MHz- 300 MHz)
AMD K6-2 (200 MHz - 570 MHz, လိုအပ်ပါက 100 MHz Bus အား Support) လုပ်နိုင်
AMD K6 III (333 MHz - 550 MHz, လိုအပ်ပါက 100 MHz Bus အား Support) လုပ်နိုင်
Cyrix 6x86, 6x86L နှင့် 6x86MX (90 MHz - 266MHz)
Cyrix MII (233 MHz- 433MHz) IBM 6x86, 6x86L နှင့် 6x86 MX (90 MHz-300 MHz)
IDT WinChip C6 (180 MHz-240 MHz) IDT WinChip2(200 MHz - 240 MHz)
Intel Pentium (non-MMX) (75 MHz -200 MHz)
Intel Pentium MMX (166 MHz - 233 MHz) Rise Technology MP6 (150 MHz - 366 MHz)
ST 6x86 (90 MHz - 166 MHz) Compatible Package Types 296- Pin Staggered Plastic Pin Grid Array (PPGA) 296 - Pin Staggered Ceramic Pin Grid Array (CPGA or SPGA) 296 - Pin Flip-Chip Staggered Ceramic Pin Grid Array 321 - Pin Ceramic Ping Grid Array (CPGA) Upgrading Socket7Motherboard Socket7Microprocessor များဟာ Motherboard များနှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ပေမယ့် ၎င်း Processor အကုန်လုံးဟာ Board အကုန်လုံးကို Support လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့် Upgrade ပြုလုပ်ရာတွင် Motherboard ၏ Model အားသေချာစွာသတိပြုရန် လိုအပ်ပါတယ်။
Posted by Xai Yak at 14:18 No comments:
Posted by Xai Yak at 13:56 No comments:
Cisco Router ၏ Interface အား DHCP Server မှ IP address သတ်မှတ်ပေးနိုင်ခြင်း
Cisco Router တွေမှာ ပါဝင်တဲ့ Interface ကို DHCP Server မှ တစ်ဆင့် IP address သတ်မှတ်တဲ့ ပုံစံကိုဖော်ပြပေးပါ့မယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Cisco Router တွေမှာ မိမိကိုယ်တိုင် IP address တွေကိုသတ်မှတ်ချင်ပါက (IP Address) ဆိုတဲ့ Command ကို အသုံးပြုပြီး သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ Cisco Router တွေမှာ IP address ကို Static သတ်မှတ်တဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က ၎င်း Interface အတွက် လိုအပ်တဲ့ IP address ကို DHCP Server မှတစ်ဆင့် သတ်မှတ်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ ဒါကို ယခုသင်ခန်းစာမှာ ပုံနှင့်တကွဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ဒီတော့ အောက်မှာဖော်ပြပေးထားတဲ့ ပုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Cisco Router တွေရဲ့ Interface တွေထဲမှာ လိုအပ်တဲ့ IP address တွေကို DHCP Server မှ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပုံစံကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အထက်မှာ ဖော်ပြပေးထားတဲ့ Command ကတော့ Cisco Router ရဲ့ Interface မှာ IP address ကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပုံကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Xai Yak at 13:30 No comments:
ကျွန်တော်က (MLS) ဆိုတဲ့ (Multilar Switch) ရဲ့ အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော် ၎င်း (MLS) ကို Cisco ကနေမှ Catalyst 5000 Series ဖြစ်တဲ့ Version 4.1 (1) ဆိုတဲ့ Switch Operating System ရဲ့ အတွင်းမှာ စတင်အသုံးပြုဖို့ရန်အတွက် ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယခုအချိန်မှာတော့ ၎င်း (MLS) ကို Cisco Switch တွေမှာ 3560 Series ကနေပြီးစတင်အသုံးပြု လာခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီတော့ (MLS) ရဲ့ အကြောင်းကို ဆက်လက်ပြီးရှင်းပြပေးပါအုံးမယ်။ မှတ်ထားပါ။ (MLS) ဆိုတာသည် Layer2နှင့် Layer3ကိုပေါင်းစည်းပေးထားခြင်းကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက Layer2ဆိုတဲ့ (Switch) တွေရဲ့အတွင်းမှာ ယခုနောက်ပိုင်း၌ Routing Feature ပါ အသုံးပြုနိုင်စေဖို့ရန်အတွက် ဖန်တီးပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ကား ၎င်း (MLS) သည် တစ်နည်းအားဖြင့် Switching Service နှင့် Routing Service နှစ်ခုလုံးကိုပါအသုံးပြု နိုင်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ ၎င်း (MLS) Switch တွေရဲ့ အတွင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ Components တွေကိုလေ့လာကြည့်မယ် ဆိုရင် အပိုင်း (၃) ပိုင်းကို မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါတွေကတော့
၁။ Multilayer Switching Route Processor (MLS-RP)
၎င်း Route Processor ဆိုသည်ကား တစ်နည်းအားဖြင့် Packet Forwarding ကို အလုပ်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ရန် အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၎င်း Processor သည် Routing Function များနှင့် တစ်ခြားသော Accessibility များကိုပါ ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
၂။ Multilayer Switching Protocol (MLS-SE)
၎င်း Switching Engine ကတော့ Layer3မှဆင်းသက်လာတဲ့ Packet များကို MAC Address ဖြင့် ပြောင်းလဲပေး၍အလုပ်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း အစရှိသော Layer2အပိုင်းကို ထိန်းချုပ်စီမံပေးပါတယ်။
၃။ Multilayer Switching Protocol (MLSP)
၎င်း Protocol သည် တစ်နည်းအားဖြင့် MLS-RP နှင့် MLS-SE နှစ်ခုကိုပေါင်းစည်းပေးကာ အတူတကွ အလုပ်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရန်အတွက် စီမံပေးပါတယ်။ ဒီတော့ ၎င်း Protocol ရဲ့ အတွင်းမှာ Layer2နှင့် Layer3အပိုင်းနှစ်ခုကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း အလုပ်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရန် အတွက်ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်၎င်း Protocol ရဲ့ အတွင်း၌ VLAN တည်ဆောက်ပေးခြင်း VIP တည်ဆောက်ပေးခြင်း၊ Routing Function များအသုံးပြုခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။
Posted by Xai Yak at 13:25 No comments:
ယခု သင်တို့ရဲ့ Computer System တွေမှာ Name ကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်လို့ရပါသလဲ ဆိုတာကို ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။ ဒီတော့ ...သင်တို့ကအရင် စဉ်းစားကြည့်ပါအုံး။ သင်အသုံးပြုနေတဲ့ Computer နဲ့ Network ချိတ်ဆက်တားတဲ့ Computer System တွေရဲ့ Name တွေကို ဘယ်လိုမျိုးသတ်မှတ်ကြပါသလဲ ဆိုတာကို။ ကောင်းပြီ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်ကသင်တို့ကို ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။
1. Flat Namespace
၎င်း Flat Namespace ကိုတော့ Computer ရဲ့ Name လို့လည်းခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ ၎င်း Computer ရဲ့ Name ဆိုသည်ကားဥပမာအားဖြင့် Youth ဆိုသည်ကား Flat Namespace တစ်လုံးပင်ဖြစိသည်။
2. Hierarchial Namespace
၎င်း Hierarchial Namespace ဆိုသည်ကား Computer System ၏ Name ကို သက်ဆိုင်ရာ Domain မှတစ်ဆင့် ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်း ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော် Domain သည် သက်ဆိုင်ရာ Names များကို တစ်စုတစ်ဝေးတည်းပေါင်းစည်းထားခြင်းကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ အားဖြင့် Youth Training . Com သည် Hierarchial Namespace ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ Domain သည်ကား Training.Com ပင်ဖြစ်သည်။
Posted by Xai Yak at 14:58 No comments:
ဂူဂဲလ်မှ အခမဲ့သုံးခွင့် ပြုထားသည့် ဂျီမေးလ်နှင့် ဂျီတော့ပ်များကို အစိုးရအနေဖြင့် ကြားဖြတ် စောင့်ကြည့်၊ ဖောက်ထွင်းနိုင်ကြောင်း အင်တာနက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်သူများက ပြော သည်။
ကြားခံ ဆာဗာသုံးခုမှာ အသုံးပြုရာ နယ်မြေအခြေစိုက် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အလိုက် ထားရှိသည့် Local ISP (Internet service provider), တနိုင်ငံလုံးအား အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည့် ရတနာပုံ တယ်လီပို့စ်နှင့်မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး MPT ကဲ့သို့သော Main ISP နှင့် ရန်ကုန်တိုင်း သံလျင်မြို့နယ်တွင် ထားရှိသည့် ဟံသာဝတီ National Gateway တို့ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဂျီမေးလ်၊ ဂျီတော့ပ်အား တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှု့ခွင့်ရနေသည်ဟု ထင်မြင်ရသော်လည်း အမှန်တွင်မူ အထက်ပါ ကြားခံဆာဗာသုံးခုအား ဖြတ်ကျော်ပြီးမှသာလျှင် ကြည့်ရှုရနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းကြားခံ ဆာဗာသုံးခု မှာလည်း အစိုးရ၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ထားရှိခြင်းဖြစ်ကာ ယင်းတို့မှ အဆင့်ဆင့် ဖြတ်ကျော် ဝင်ရောက်ရခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာ့အင်တာနက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာတဦးအဆိုအရ အစိုးရအနေဖြင့် အင်တာနက် သုံးစွဲသူ အားလုံး ကို စောင့်ကြည့်လေ့ရှိခြင်းမဟုတ်ဘဲ ထင်ရှားသူများ၊ ပစ်မှတ်ထားခံရသူများကို စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြစ်ကာ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ တက်လာသည့်နောက်ပိုင်းတွင် စောင့်ကြည့်မှု လျော့ပါးလာသည်ဟု ဆိုသည်။
“စာရင်းကတော့ အတိအကျ မရှိဘူး။ ၅ဝ လည်း ဖြစ်ရင် ဖြစ်မယ်၊ ၁ဝဝ လည်း ဖြစ်ရင် ဖြစ်မယ်။ ဥပမာ ဘုန်းကြီး အရေးအခင်းဖြစ်မယ်ဗျာ။ ဘုန်းကြီးအရေးအခင်းဖြစ်တုန်းကဆိုရင် သူတို့ စောင့်ကြည့်ရမယ့်သူတွေ အများကြီးပဲ။ အယောက် ၂၀၀ လောက်ဖြစ်ရင် ဖြစ်သွားမယ်။ သာမန်ကတော့ အရေးကြီးတဲ့ အန်တီစုတို့ ဘာတို့ကတော့ Report အမြဲတမ်း လုပ်နေရမှာပေါ့နော်။” ဟု ရတနာပုံ တယ်လီပို့စ် ဆာဗာအင်ဂျင်နီယာဟောင်းတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
စောင့်ကြည်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဆက်သွယ်ရေးတပ် (ကက-ဆက်) မှ စစ်ဘက် အရာရှိ အများစု ပါဝင်သည့် Net Security ကဲ့သို့သော အင်တာနက်လုံခြုံရေးဌာနမှ လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်ကာ အဓိက အားဖြင့် နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ဆောင်နေသူများကို စောင့်ကြည့်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ခြင်း များအတွက် အသုံးစားရိတ်ကို စစ်ဘက် အသုံးစားရိတ်များတွင် ထဲ့သွင်း ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။
စောင့်ကြည့်ခံရသူ အရေအတွက်မှာမူ အတိအကျမရှိနိုင်သော်လည်း ပြည်တွင်း၌ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု တစုံတရာဖြစ်ပေါ်ပါက စောင့်ကြည့်ခံရသူ များပြားနိုင်ပြီး သာမန်ချိန်တွင်မူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ လူရွှင်တော် ဇာဂနာ ကဲ့သို့သော သူများမှာ စောင့်ကြည့်ခံရနိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု အင်ဂျင်နီယာက ခန့်မှန်းထားသည်။ ထိုသူမှာ အဓိက အားဖြင့် Network ပိုင်းဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းရေး၊ တဦးနှင့် တဦး မေးလ်ပို့ရာတွင် မှန်ကန်ကြောင်းဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်ခြင်း Certificate Authority ပိုင်းဆိုင်ရာ ဌာနတွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
“MPT ကနေ ချပေးလိုက်တဲ့ လမ်းညွန်ချက်အတိုင်း ဘယ် Port ပိတ်မယ်၊ ဘယ် Port ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်။ အဲဒါတွေ ကတော့ အပေါ်က လူကြီးပိုင်းတွေပဲ လုပ်တာလေ။ သူတုိ့အပေါ်က လမ်းညွန်ချက်က ဒေါက်တာ လွဏ်းဆွေပိတ်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်ဘလော့ဂ်ဆိုက်ပိတ်မယ်ပေါ့။ တခု ပိတ်မယ်၊ ဖွင့်မယ်။ အပေါ်မှာ သူတို့ ဘယ်လို လုပ်တယ်ဆိုတာတော့ ကျနော်တို့ သေချာမသိဘူး။” ဟု ဆာဗာ အင်ဂျင်နီယာဟောင်းက ဆိုသည်။
DNS Poisoning ဆိုသည်မှာ ISP ဆာဗာတွင် ကြားခံ စက်ကိရိယာထားရှိ၍ အင်တာနက်အသုံးပြုသူ၏ အချက် အလက်များကို ခိုးယူခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ လုပ်ဆောင်ရာတွင် သုံးစွဲသူမှ ရိုက်သွင်းလိုက်သည့် Login ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ကြားဖြတ်ယူထားကာ၊ ယင်းမှတဆင့် သက်ဆိုင်ရာ ဆာဗာသို့ ပေးပို့ခြင်း ဖြစ်သည်။
VPN မှာ မိမိအသုံးပြုနေသည့်နိုင်ငံရှိ ဆာဗာများကို ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိဘဲ အခြားဆာဗာမှတဆင့် မိမိ သွားလိုရာ အင်တာနက်စာမျက်နှာသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ယာယီအကာအကွယ်ဖြစ်စေသလို သီးခြားလျို့ဝှက်ကုတ်ဒ်များဖြင့် ပုံစံပြောင်းအသုံးပြုခြင်း ( Encryption) ဖြင့်လည်း ကာကွယ်နိုင်သည်ဟု အင်တာနက်လုံခြုံရေးသမားများက လမ်းညွှန်ထားသည်။
မှတ်ချက်။ မဇ္ဈိမ မှပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြသည်။
Posted by Xai Yak at 12:15 No comments: